Ngaba ikhowudi yeVenkile yeVidiyo yeyona Mhleli weKhowudi ye-OSX ilungileyo kwiNtengiso? | Martech Zone
NgoMgqibelo, Matshi 6, 2021 NgoLwesihlanu, Matshi 5, 2021 Douglas Karr
Veki nganye ndichitha ixesha kunye nomhlobo wam olungileyo, UAdam Omncinci. UAdam ngumphuhlisi obalaseleyo… uphuhlise yonke iqonga lokuthengisa izindlu nomhlaba enezinto ezintle-nokuba nje ukongeza ngokuthe ngqo kwi-imeyile iiarhente zakhe ukuba zithumele iiposikhadi ngaphandle kokuyila!
Njengam, uAdam uphuhlise uluhlu lweelwimi zokuprograma kunye namaqonga. Ewe kunjalo, uyenza ngobuchule kwaye yonke imihla ngelixa ndinamathele ekuphuhliseni iiveki ezimbalwa okanye njalo. Andisayonwabeli njengakuqala… kodwa ndisonwabile.
Bendikhalaza kuAdam ukuba bendigqithile kubahleli beekhowudi ezimbalwa kulo nyaka, ndingonwabanga kwaphela. Ndiyabathanda abahleli beekhowudi abangaboni kakuhle-ke imowudi emnyama ibalulekile, enefomathi ezenzekelayo yekhowudi, kunye ne-auto indents ikhowudi, enceda ekuchongeni iimpazamo ze-syntax, kwaye mhlawumbi ikwanobukrelekrele bokugqibezela njengoko ubhala. Ubuze…
Ukhe wayizama ikhowudi yeVisual Visual Studio?
Intoni? Khange ndicwangcise kumhleli weMicrosoft okoko ndadibanisa ndaza ndalwela ukuqhuba i-C # kwiminyaka elishumi eyadlulayo.
Ewe… ungazongeza ezo zongezo kuyo… intle kakhulu.
Ke, phezolo ndikhuphele Ikhowudi ye-Visual Studio… Kwaye wabethwa ngumoya ngokupheleleyo. Iyatshisa ngokukhawuleza kwaye iyamangalisa.
Iimpawu zibandakanya ukuxhasa ukulungisa ingxaki, ukuqaqambisa i-syntax, ukugqitywa kwekhowudi ekrelekrele, ii-snippets, ukuphinda usebenzise ikhowudi, kunye ne-Git efakwe ngaphakathi. Ungawutshintsha umxholo, iindlela ezimfutshane, kunye neetoni ozikhethileyo ukuze uzenzele eyakho.
Izandiso zeKhowudi yeVenkile ebonakalayo
Ukongezwa kweKhowudi yeVS kukuvumela ukuba ungeze iilwimi, ukulungisa ingxaki, kunye nezixhobo kufakelo lwakho ukuxhasa ukuhamba komsebenzi. Imodeli yokwandiswa kweKhowudi yeVS ivumela ababhali bongeze iplagi ngokuthe ngqo kwiKhowudi ye-VS ye-VS kunye negalelo lokusebenza kwii-APIs ezifanayo ezisetyenziswa yiKhowudi yeVS.
Yiza nombono woLwandiso ngokunqakraza kwi icon yoLwandiso kwi Ibha yomsebenzi kwicala leKhowudi yeVS okanye Jonga: Izandiso myalelo kwaye ungafaka ulwandiso ngokuthe ngqo ngaphakathi kwiKhowudi yeVenkile yeVidiyo ngaphandle kokuqalisa kwakhona iapp!
Ukuba ubundixelele kwiminyaka embalwa edlulileyo ukuba ndiza kuphinda ndenze inkqubo kumhleli weKhowudi yeMicrosoft, ngekhe ndihleke ... kodwa ke ndilapha!